‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ का विजेता किरण गजमेरलाई नेपाल प्रवेशमा रोक ! कारण भने यस्तो – Online Khabar 24
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ का विजेता किरण गजमेरलाई नेपाल प्रवेशमा रोक ! कारण भने यस्तो
गृह मन्त्रालयले ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’का विजेता किरण गजमेरलाई नेपाल प्रवे’शमा रोक लगाएको छ।
गजमेरले नेपाल बस्न पाउने अवधि गुजारी सकेकाले अध्यागमनले उनलाई नेपाल प्रवे’शमा रो’क लगाएको हो । गजमेर सन् २०२१ भर नेपाल आउन पाउँदैनन् उनले सन् २०२१ मा नेपाल बस्न पाउने अवधि गुजारि’सकेका छन् ।
अब गजमेर सन् २०२२ मा मात्र नेपाल प्र’वेश गर्न पाउनेछन् । गत सोमबार (असोज ११ गते) कतार एयरको क्युआर ६५० नम्बरको उडानबाट नेपाल आएका थिए। सोही दिन त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले त्यहीबाट उनलाई अमे’रिका फिर्ता पठाइदिएको थियो।
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को तेस्रो संस्करणमा गजमेरलाई दर्शकहरुले सर्वाधिक रुचाएका थिए। भुटानबाट विस्था’पित भएपछि गजमेर परिवारसहित झापाको शर’णार्थी शिविरमा बस्दै आएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघले भुटानी शर’णार्थीका लागि तेस्रो मुलुक पुर्नवास कार्यक्रम सुरु गरेपछि गजमेर अमेरिका गएका थिए ।
सन् २००६ बाट राष्ट्रसंघले भुटानी शरणा’र्थीलाई अमेरिकामा पुर्नवास गराउन थालेको थियो । गजमेर सन् २०११ मा परिवारसहित अमेरिका गएका हुन । त्यसपछि उनले अमेरिकाको राहदानी प्रयोग गर्दै आएका छन्। गजमेर प्रतिभावान गायक हुन्। उनी समाजसेवामा समेत सक्रिय छन्।
नेपाल र अमेरिकाबीच भीषा पारस्पारिकता भएपछि पर्यटन भीषामा दुवै देशका नागरिक एकअर्को मुलुकमा १८० दिन बस्‍न पाउँछन्। अमेरिका बाहेकका अन्य मुलुकका नागरिकहरुले पर्यटक भीषामा १५० दिन मात्र नेपालमा बस्न पाउँछन्। यो खबर अन्नपुर्ण पोस्टमा छ ।
Prevघरमा श्रीमती हुँदा हुँदै यौ’ न सम्ब’न्धका लागि बाहिर किन ? यस्तो छ भित्री रह्स्य !
nextबिना धितो वाणिज्य बैकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ लाखसम्म ऋण दिने, यसरी दिनुहोस् आवेदन